प्यूठानको स्वास्थ्यमा संस्थागत सुधारको प्रयास
अपडेट : तिराम बस दुर्घटनामा १ को मृत्यु
प्यूठानको तिराममा बस दुर्घटना, विस्तृत विवरण आउँदै
जनताको उपचार खर्च सरकारले नगर्ने !
बुवाको किरिया बसेका छोरालाई एपेन्डिसाइटिस भएपछि ..!
देशभर संक्रिय संक्रमित ३८ हजार
शुरु भयो दशैँ
बिहिवार, आश्विन १, २०७७ गंगा खड्का
गुल्मी : कोरोना भाईरसको संक्रमण दिनानुदिन समुदायमै फैलिरहेको अवस्थामा जिल्लामै पीसीआर परिक्षण शुरु भएको छ । कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिम न्युनिकरण गर्न र छिटो छरितो पीसीआर परिक्षण गरी संक्रमित भए नभएको पुष्टी गर्न अब जिल्लामै पीसीआर परिक्षण शुरु भएको हो । आजदेखी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिकास्थित उपल्लो तमघासमा कोभिड १९ परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी पीसीआर परिक्षण शुरु गर्ने प्रक्रिया अगाढी बढाइएको रेसुंगा नगरपालिकाले जनाएको छ । केही दिनमै उक्त परिक्षण प्रयोगशालाबाट पीसीआर परिक्षण हुने भएको हो ।
परिक्षण प्रयोगशालाको उद्धघाटन परराष्ट्रमन्त्री एंव सरकारका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले गरेका छन् । ज्ञवालीले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले सचेत हुन र नागरिकलाई संक्रमणको जोखिमबाट बचाउन सवै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले आजदेखी लामो दुरीका यातयात खुलेपनि सरकारले तोकेका स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर यातयात सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
ज्ञवालीले लामो समयसम्मको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई असर पु¥याएको उल्लेख गर्दे सरकारले आर्थिक गतिविधी सञ्चालन गर्न लकडाउन खुकुलो बनाएपनि उच्च सावधानी अपनाउन नागरिकलाई आग्रह गरे । नागरिक समाजका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डेले ढिलो गरी सञ्चालन भएको पीसीआर परिक्षणले नागरिकलाई सहज हुने बताए । पाण्डेले लामो समयसम्म संक्रमितको रिपोर्ट नआउँदा समुदायस्तरमा कोरोना भाईरसको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दे जिल्लामै पीसीआर परिक्षण शुरु भएपछि जोखिम न्युनिकरण हुने बताए ।
यसअघि गुल्मीका व्यक्तिको स्वाव संकलन गरी रुपन्देही पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । स्वाव संकलन गरी पठाएको लामो समयसम्म रिपोर्ट नआउँदा क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दे आईरहेका थिए । गुल्मीबाटै पीसीआर परिक्षण हुनेभएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, आश्विन १, २०७७, ०५:०८:४९
कोरोना संक्रमित ३३ हजार
सातवटा स्वास्थ्य समस्यामध्ये कोरोनासहित छ वटा जितें
आइतवार, आश्विन २५, २०७७ सूर्य थापा
प्यूठानका चार गाउँपालिकालाई अस्पताल बनाउन चार करोड
शनिवार, आश्विन २४, २०७७ केशरराज क्षेत्री
प्यूठानको स्वास्थ्यमा संस्थागत सुधारको प्रयास बुधवार, कार्तिक १२, २०७७ 82
अपडेट : तिराम बस दुर्घटनामा १ को मृत्यु आजको पोष्ट
प्यूठानको तिराममा बस दुर्घटना, विस्तृत विवरण आउँदै आजको पोष्ट
अन्तरस्थानीय तह कर्मचारी सरुवा तयारी आजको पोष्ट
अस्पतालमा जनताका लागि अक्सिजन किन्ने बजेट छैन्, सांसद र पिएलाई दसैँ भत्ता वितरण शनिवार, कार्तिक १, २०७७
बढिरहेको बलात्कार : केमिकल ‘क्यास्ट्रेसन’ एक उपाय आइतवार, आश्विन २५, २०७७
शाखा अधिकृत घर्तीले ल्याए ‘म परदेशी’ आइतवार, आश्विन ११, २०७७
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले हटाए प्रमुख सचेतक शाहलाई सोमवार, आश्विन २६, २०७७
राजपत्रमा ‘देउखुरी’ लेखेपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा फेरि विवाद बिहिवार, आश्विन २२, २०७७
नेकपा रुपन्देहीका २ हजार कार्यकर्ताले राजीनामा दिँदै भने,‘भोट बुटवलको, मायाँ दाङको’ मंगलवार, आश्विन २०, २०७७